Otu Ascott Sun: Mmekọrịta Ọhụrụ - yana ihe ọ pụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mgbasa Ozi » Otu Ascott Sun: Mmekọrịta Ọhụrụ - yana ihe ọ pụtara
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Mgbasa Ozi • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Ị kpọtụrụ aha n'akwụkwọ akụkọ a, ka ị nwere nkọwa ndị ọzọ ịgbakwunye?
Ascott ga -ejikwa otu 1,905 gafee ụdị aha ụlọ ọrụ atọ dị iche iche n'ime Sun Group's Tay Ho View Complex na Hanoi. Mmepe agbakwunyere akara ngosi ga -abụ akara ngosi ọhụrụ nke Vietnam, na -agbanwe mbara igwe obodo ma na -eme ka mpaghara Tay Ho dị n'akụkụ mmiri dị ọhụrụ. Ascott ga -ewebata akara mkpokọta Crest na Vietnam. Ugbu a dị naanị na France, nke a bụ nke mbụ Nchịkọta Crest ga -amalite na Eshia, na -enye ndị ọbịa ahụmịhe okomoko pụrụ iche site na ngwakọta agwa na ihe nketa pụrụ iche. Ascott ga-ewebata mbinye aka ya Ascott The Residence brand yana akara ya na-eto ngwa ngwa, Citadines Aparthotel. Ascott Ebe obibi na -enye ndị ọbịa nwere nghọta ahụmịhe pụrụ iche na nkeonwe ebe Citadines Aparthotel na -enye mgbanwe na ịdị irè nke ụlọ nwere ọrụ nwere ọrụ ụlọ oriri na ọ andụ andụ yana mmetụta mpaghara na -emetụta. A na -atụ anya na ụlọ obibi atọ a na -arụ ọrụ ga -emepe n'usoro site na 1Q 2023.
Na mmemme mbinye aka nke mere n'etiti Ascott na Sun Group, Mr Kevin Goh, onye isi oche CLI maka Lodging kwuru, sị: “Formekọ mmekorita atụmatụ na ndị egwuregwu ụlọ ọrụ na -eduga na -aga n'ihu na -abụ atụmatụ isi uto maka Ascott. Ọ na -enye anyị ohere ịbanye na pipeline nke ọrụ dị mma iji bulie Pọtụfoliyo ụwa anyị na ego anyị na -eme ugboro ugboro ka ha mepere ma kwụsie ike. Nke a dabara n'usoro atụmatụ ọkụ ọkụ nke CLI. Mmekọrịta dị n'etiti Ascott na Sun Group iji jikwaa ụdị ụlọ ọrụ atọ kacha arụ ọrụ na Vietnam na -egosipụta ntụkwasị obi ha na ọkachamara Ascott na aha ụwa niile. Ọrụ a ga -abụ ngosipụta nke ike ile ọbịa nke Ascott. Anyị niile, anyị na -atụ anya iwebata mgbama ọkụ ihe owuwu ọhụrụ na Vietnam, na -adọta ndị ọbịa obodo na mba ụwa ka ha soro anyị chọta ụlọ ha. Mmekọrịta anyị na atụmatụ anyị ga -enyekwa Ascott ohere imekọ ihe ọnụ na ọrụ Sun Group n'ọdịnihu. ”
Nguyen Vu Quynh Anh, onye isi oche, Sun Hospitality Group (SHG), ụdị ọbịa ọbịa nke Sun Group kwuru, sị: “Sun Group na SHG nwere obi ụtọ isonye Ascott, otu n'ime ụlọ ọrụ na -eduga ebe obibi n'ụwa, iji mezuo ọhụụ anyị maka Tay Ho View. Mgbagwoju anya. Dịka onye ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ ebe obibi nke Asia Pacific, aha na netwọkụ Ascott zuru ụwa ọnụ dabara adaba maka ọrụ ọkwa ụwa anyị. Site na ahụmịhe Sun Group na ahụmịhe SHG n'ọtụtụ ọrụ klaasị nke Vietnam dịka InterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole-MGallery (Sa Pa), wdg yana ahụmịhe ile ọbịa nke Ascott na-enweta. , anyị nwere obi ike na Tay Ho View Complex ga -abụ akara ụlọ nrụpụta ọhụrụ nke obodo iji dọta uche onye ọ bụla. Tay Ho View Complex atọrọla ịkọwa ụkpụrụ ile ọbịa n'obodo. Ọzọkwa, oru ngo a ga -emekwa ka mmụba akụ na ụba Hanoi na -aga n'ihu, na -adọta azụmahịa na ndị njem ezumike n'obodo ahụ ma na -enyekwa obodo ohere ọrụ bara uru. "
Nọnyere Ascott na Tay Ho View Complex, akara ngosi ụkpụrụ ụlọ ọhụrụ nke Hanoi
Tay Ho View Complex dị n'otu n'ime mpaghara Hanoi kacha dịpụrụ adịpụ ma dị n'akụkụ ama ama West Lake. Na mgbakwunye na ebe obibi Ascott nke ụlọ obibi nwere ọrụ, mmepe agbakwunyere nwekwara ihe azụmaahịa na azụmaahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ nri na nhọrọ ndị na -ere ahịa ga -agba gburugburu Tay Ho View. Ọ ga -adịkwa n'akụkụ Opera House na -abịanụ nke a ga -emepe n'ọdịnihu. Mpaghara azụmahịa etiti nke Hanoi na Hoan Kiem, My Dinh na Ba Dinh, yana Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Noi Bai dị n'ime nkeji iri abụọ.
Ascott Ebe obibi a ga-enye ụlọ 1,167 nwere ụlọ ime ụlọ, ụlọ ihe nkiri, otu ụlọ ruo ime ụlọ anọ na ụlọ abụọ, ebe Citadines Apart'hotel ga-enye nkeji 710 nke gụnyere studio, otu- ruo ụlọ ime ụlọ anọ na ụlọ abụọ. Mkpokọta Crest ga-enye nkeji iri abụọ na asatọ, nke nwere ọnụ ụlọ atọ na anọ nwere ọnụ ụlọ anọ. Ụlọ ọrụ dị na ụlọ atọ ahụ gụnyere ụlọ ezumike, ebe a na -agụ akwụkwọ, na ebe mgbatị ahụ. Ndị bi ebe ahụ ga-enwekwa ike ịnweta ụlọ oriri na ọ -ụ highụ dị elu site na Michelin-starred ma ọ bụ ndị chefs a ma ama n'ụwa na-ewetara ndị ọbịa njem njem nri. A ga -enwekwa klọb na ebe a na -edebe mbara igwe dị n'elu mmepe agbakwunyere maka ndị ọbịa iji zuru ike mgbe mmanya gachara.
Ọnụnọ Ascott na Vietnam
Ascott mere njem mbụ ya na Vietnam afọ 27 gara aga site na imepe Somerset West Lake Hanoi. Taa, Ascott bụ onye na-ahụ maka ebe obibi zuru ụwa ọnụ na mba ahụ. Na mgbakwunye na ụlọ obibi atọ a na -arụ ọrụ, Pọtụfoliyo Ascott na Vietnam nwere ihe dị ka ụlọ obibi 9,200 n'ihe karịrị ụlọ 30 n'ofe obodo iri na abụọ dịka Binh Duong, Cam Ranh, Danang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa na Vung Tau. N'ọnwa June 2021, Ascott's private fund, Ascott Serviced Residence Global Fund, nwetara 364-unit Somerset Metropolitan West Hanoi nke akwadoro imepe na 2024.